Fanatsarana ny fitaterana :: Mamaramparana ny fanomanana an’ireo «Bus Class» ny zotra 192 • AoRaha
Fanatsarana ny fitaterana Mamaramparana ny fanomanana an’ireo «Bus Class» ny zotra 192
Taksibe manara-penitra na “Bus class” iray an’ny zotra 015 mampitohy an’i Mandroseza sy 67Ha irery ihany no nisantatra ny fampiharana ny fanatsarana ny fitaterana olona teto an-drenivohitra, omaly. Eo am-pamaranana ny pitsopitsony hahatomombana an’ireo fiara hampiasainy amin’ity tetikasa ity kosa ny kaoperativa Onja, amin’ny zotra 192 izay hisahana ny fitaterana miala eny an’Ankadindratombo mihazo an’Ilafy.
Nanam-paniriana ny hanomboka ny fampiasana an’ireo « Bus Class » ao aminy io kaoperativa io, omaly. «Avy aminay ihany no tsy naharaikitra ny fandefasana an’ireo taksibe vaovao satria tsikaritra ny tsy fahafenoan’ny fepetra hahafahan’ireo fiara miasa. Sarotiny sy hentitra amin’ny famaliana ny mason-tsivana rehetra takiana amin’ireo Bus Class mantsy ry zareo ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra », araka ny fanazavan-dRakotoarisoa Landry, filohan’ny kaoperativa Onja.
Hiasa manomboka anio ireo taksibe manara-penitra dimy avy amin’io kaoperativa io raha tsy misy ny sampona. Saika nilaza ho afa-po kosa ireo mpandeha liana sy nitaingina an’ilay Bus Class an’ny zotra 015, omaly. Nahafeno ny sezany ny fiara ny maraina, raha somary vitsivitsy mpandeha ny tolakandro, teo anelanelan’ny tamin’ny 2 ora sy sasany sy tamin’ny 3 ora. Fiantsonana vitsivitsy ihany no andalovany sady tsy ijanonany maharitra, izany hoe tsy mihoatra ny iray minitra. Efapolo minitra teo ho eo no niantohany ny fitaterana niainga teny 67Ha hatreny Mandroseza.
Sokajin’olona maro, nahitana an’ireo antonontonompivelomana, no niaraka tamin’ ilay Bus Class an’ny zotra 015. Heverin’ireo mpandeha fa lafolafo ihany ny sarandalana 1 500 ariary saingy namaly ny filàna tamin’ny fitaterana haingana sy ny filaminana ary ny fahatsaran’ny fiara mpitatitra ny vola naloa. Nandeha tsara ihany koa ny fifandraisana aterineto na « Wifi » tamin’iry taksibe manara-penitra iry.